Posted by PhyoPhyo at Wednesday, October 30, 2013 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
၁. အမျိုးသားကဗျာနေ့မှာကဗျာရွတ်ခဲ့တဲ့ ချားလ်စ်မင်းသားကြီး
အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာ ဒိုင်လန်သောမတ်စ်(၂၇ အောက်တိုဘာ ၁၉၁၄ - ၉ နိုဝင်ဘာ ၁၉၅၃) ကို အမြဲလေးစားခဲ့တဲ့ မင်းသားချားလ်စ်ဟာ သူအကြိုက်ဆုံး ဒိုင်လန်သောက်မတ်စ်ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အိမ်မှာရွတ်ပြီး အသံသွင်းမှတ်တမ်းထင်ထားပါတယ်။ National Poetry Day မှာ လွှင့်ဖို့အတွက်ပါ။ မင်းသားကြီးချားလ်စ် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကဗျာက Fern Hill ပါ။ အဲဒီ ကဗျာဟာ ဝေလကဗျာဆရာဒိုင်လန်ရဲ့ ကမာသန်ရှီးယားနယ်က အဒေါ်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံထဲကိုသွားလည်ဖြစ်တဲ့ ကလေးဘဝကအဖြစ်အပျက်လေးတွေကို သတိတရခံစားပြီးရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကဗျာလို့ဆိုတယ်။ “ကရုဏာသက်မိအောင် ထိမိလွန်းတယ်။ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ကောင်းတယ်။ စိတ်ထိခိုက်စရာလည်းကောင်းလှတယ်” လို့ ကဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ခံစားချက်ကို မင်းသားကြီးချားလ်စ်က ပြောပါတယ်။
That's the way Jeckie listen !!!
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, October 29, 2013 Labels: ခွေးလေးအမည် ဂျက်ကီ
ဂျက်ကီလေးအိမ်ကိုရောက်လာတာ ဒီနှစ်ဆောင်းဆို ၃ နှစ်ရှိတော့မယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ နှစ် နှင်းချပ်လေးတွေ ခပ်သည်းသည်း ပိတ်လို့ ကျတဲ့နေ့တုန်းကပေါ့။
ဘတ်စ်ကားဂိတ် လူတွေကြားထဲမှာ မျက်လုံးလေးမှိတ်ချည်ဖွင့်ချည်နဲ့ ဟိုရှောင်ဒီပုန်းနဲ့ ခွေးသေးသေးလေး။ ပါလာတဲ့မုန့်တွေချကျွေးပြီး အေးစက်နေတဲ့နှင်းတွေကြားထဲမထားခဲ့ချင်လို့ အိမ်ကိုပွေ့ချီလာခဲ့တယ်။ အေးလွန်းလို့ တုန်နေရှာတယ်။
ဒီနှစ် နှင်းတွေကျတဲ့နေ့ ဂျက်ကီအကြောင်း စာတစ်ပုဒ်လောက်တော့ ရေးချင်မိသေးတယ်။
သည်းခံရှာတယ်၊ ဘာလုပ်လုပ် ငြိမ်ခံတယ် :D
heater ပေါ်ခေါင်းတင်၊ အအေးကြောက်တတ်လိုက်တာ
သူ့ သူငယ်ချင်းနာမည်တစ်ခုစီ ရွတ်ပြလို့ စိတ်ဝင်တစား နားစွင့်
ဘာရယ်မဟုတ် ဂျက်ကီ video ဖိုင်ပြန်ကြည့်မိရင်း ဒီမှာ လာတင်ထားပြန်ပြီ။
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, October 29, 2013 Labels: ညွှန်းတဲ့ ရုပ်ရှင်
ဒါရိုက်တာ - Brian Percival
ထုတ်လုပ်သူ - Ken Blancato, Karen Rosenfelt
ဇာတ်ညွှန်း - Michael Petroni
သရုပ်ဆောင်များ - Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson
စာအုပ်တွေကို ခိုးယူတဲ့မိန်းကလေး လီစဲလ်မမ်မင်ဂျာ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်ယူရှာဖွေခဲ့ကြသတဲ့။ ၂၀၁၃ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့ကတော့ ပြင်သစ်-ကနေဒီယန်းသရုပ်ဆောင်မလေး Sophie Nélisse သရုပ်ဆောင်ပြီး မမ်မင်ဂျာရဲ့ မွေးစားမိဘတွေကတော့ Geoffrey Rush နဲ့ Emily Watson တို့ သရုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တယ်။ The Book Thief ဟာ သြစတြေးလျစာရေးဆရာ Markus Zusak ရဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ The Book Thief ဝတ္ထုကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဝတ္ထုစာအုပ်ဟာ ဆုပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပြီး ရက်သတ္တပတ်၂၃၀ ကျော်ကြာ The New York Time Best Seller List စာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီး အရှိန်မြင့်နေခဲ့တဲ့အချိန် နာဇီဂျာမနီပါတီကို အားလုံးက အသည်းခိုက်အောင် ကြောက်လန့်နေကြရတဲ့အချိန်၊ လီစဲလ် ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးဟာ မွေးစာဖခင်၊ မိခင်ဆီကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ လီစဲလ်အတွက် နေသားတကျဖြစ်ဖို့ အရာအားလုံးအင်မတန်ခက်ခဲနေတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ့ ညတွေညတွေမှာ လီစဲလ် လန့်နိုးနေတတ်တယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ လီစဲလ်တွေ့နေခဲ့တာက အမေရင်း နဲ့ သေဆုံးခဲ့တဲ့အစ်ကို တို့ကိုပါ။ လီစဲလ်လေးရဲ့ မှို့ယာအောက်မှာလှိူသွင်းသိမ်းဆည်းထားတဲ့ The Grave Digger’s Handbook စာအုပ်ကို မွေစားဖခင် ဟန်စ် တွေ့သွားတယ်။ ဟန်စ်က အကျိုးရှိအောင်/ အိပ်မရတဲ့နာရီတွေကို ကုန်ဆုံးသွားစေအောင် စာတစ်အုပ်ကို ဘယ်လိုဖတ်ရမယ်၊ စာတစ်ပုဒ်ကို ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာ လီစဲလ်လေးကို သင်ပေးတယ်။ လီစဲလ် ပြန်ပြီးအိပ်ပျော်သွားနိုင်တဲ့အချိန်အထိစောင့်ရင်းနဲ့ပေါ့။ ဟန်စ် တစ်ရက်တော့ ဂျူး လူငယ်လေးတစ်ဦးကို သူ့ရဲ့ အိမ်မှာ ပုန်းခိုစေတယ်။ ကူညီခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဂျူးလူငယ်လေး မက်စ်နဲ့ လီစဲလ် သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားတော့ မက်စ်က စာဖတ်ဝါသနာကြီးလှတဲ့ လီစဲလ် အတွက် စာတစ်ပုဒ် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ရေးပေးတယ်။ ဟစ်တလာရဲ့ မွေးနေ့ ဧပြီ ၂၀ ရက်နေ့က လူမြင်ကွင်းမှာပြုလုပ်နေကြ စာအုပ်မီးရှို့ပွဲတစ်ခုမှာ လီစဲလ် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ခိုးယူခဲ့လိုက်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသော မျက်မြင်သက်သေက မြို့တော်ဝန်ရဲ့ ဇနီး တဲ့။ လီစဲလ် အတွက် ဒုက္ခပွေတော့မလား။ စိတ်ဝင်စားစရာရိုက်ချက်တွေနဲ့ Book Thief လေး လီစဲလ်ရဲ့ ဘဝအကြောင်းနဲ့ နာဇီဂျာမနီပါတီ စစ်ပွဲမြင်ကွင်းတွေ ထိတ်လန့်တကြားမြင်တွေ့ရမယ့် ဒရာမာရုပ်ရှင်ပါ။
ဒါရိုက်တာ - Chris Buck, Jennifer Lee
ထုတ်လုပ်သူ - Peter Del Vecho, John Lasseter
ဇာတ်ညွှန်း - Jennifer Lee
အသံသရုပ်ဆောင်များ - Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Santino Fontana, Josh Gad, Alan Tudyk
ငွေနှင်းမှုန်တွေ တဖွဲဖွဲ မစဲတမ်းကျလာတတ်တဲ့ ဆောင်းရာသီကို ကြိုဆိုရင်းကြည့်နိုင်မယ့် စွန့်စားခန်း၊ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ Walt Disney က ရုပ်ရှင်ပါ။ Frozen ရုပ်ရှင်မှာ အကြောက်အရွံကင်းပြီး အရာရာကို အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ အန်နာ (Kristen Bell)ရယ်၊ ကျားကျားလျားလျား တောင်တက်သမား ခရစ်တော့ဖ် (Jonathan Groff)ရယ်၊ သူ့ရဲ့ သစ္စာရှိလှတဲ့ ရိန်းဒီးယားသမင်ကြီး စဗန် တို့ဟာ သည်းထိတ်ရင်ဖို စွန့်စားရမယ့်ခရီးတစ်ခုမှာ ခရီးအတူသွားနေမိကြပြီ။ ထူးခြားဆန်းပြားအဖြစ်တွေလည်း ပက်ပင်းကြုံတော့တယ်။ အင်မတန်ရယ်မောစရာကောင်းလှတဲ့ နှင်းလူ အိုလာ့ဖ် (Josh Gad)လည်း အဲဒီခရီးမှာ တပါတည်းလိုက်လာတယ်။ သူ့တို့ရင်ဆိုင်တိုးနေကြတဲ့ခရီးဆိုတာက ထောင်ချောက်တစ်ခုမှာ အံ့မတုနိုင်ဘဲပိတ်မိနေတဲ့အန်နာရဲ့ အစ်မ အဲလ်စာ (Idina Menzel)ကို ပြန်လည် ကယ်ဆယ်ထုတ်ယူဖို့ပါ။ အဲလ်စာ့မှာ ရေခဲစွမ်းအားရှိတယ်၊ နှင်းဘုရင်မတစ်ဦးပေါ့။ အန်နာရော အဲလ်စာပါ Arendelle နိုင်ငံ တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေပါ။ အဲလ်စာရဲ့ ရေခဲစွမ်းအားကို မှော်စွမ်းအားတွေနဲ့ခိုင်းစေပြီး တလွဲအသုံးချစေခိုင်းထားတော့ အန်နာတို့ရဲ့ နိုင်ငံဟာ မဆုံးတော့တဲ့ ဆောင်းရာသီထဲမှာ အေးခဲပိတ်မိနေကြတော့မယ်တဲ့။ အစ်မ အဲလ်စာ နဲ့ နေရောင်နွေးနွေးနေ့ရက်တွေပြန်မြင်ရဖို့ အန်နာ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားရတော့မှာပေါ့။
ဒါရိုက်တာ - Martin Scorsese
ထုတ်လုပ်သူ - Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Riza Aziz, Joey McFarland, Emma Koskoff
ဇာတ်ညွှန်း - Terence Winter
သရုပ်ဆောင်များ - Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Jon Favreau, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jean Dujardin
ထူးချွန်ကျော်ကြားတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးတွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Casino ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကူးခဲ့သူ၊ The Departed နဲ့ အကယ်ဒမီဆုရရှိခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ဒါရိုက်တာကြီး မာတင်စကော့စေးစီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ စတော့ဈေးနှုန်းတွေ ဈေးကစား၊ ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချခံခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန်စာရေးဆရာ Jordan Belfort ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို အခြေခံထားတာပါ။ ဘဲလ်ဖော့ထ်အဖြစ် လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယိုက သရုပ်ဆောင်ပါတယ်။ The Wolf of Wall Street ဟာ စကော့စေးစီး နဲ့ ဒီကာပရီယိုတို့ ငါးကြိမ်မြောက် လက်တွဲရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပါ။ နယူးယောက် စတော့ဈေးကွက်ကိုကစားနေတဲ့ စတော့ပွဲစားတစ်ဦး၊ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက် လိမ်လည်တဲ့ကိစ္စတွေဖန်တီးတယ်။ Wall Street က အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေမှာ ပူးပေါင်းတယ်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း အုံလိုက်ကျင်းလိုက် စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက်ကြတယ်။ ပြစ်မှုတွေ၊ ခြစားမှုတွေ နဲ့ ဗဟိုအစိုးရအပါအဝင် ပွေလီလိမ်ယှက်နေတဲ့ တကယ့် Wall Street ကမ္ဘာက အဖြစ်အပျက်တွေကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ပြသလိုက်တဲ့ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်နမူနာမှာ hip hop အဆိုသမား Kanye West ရဲ့ Black Skinnhead သီချင်းနဲ့ နောက်ခံထားပြသသွားတယ်။ ဒီကာပရီယိုရဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟန်ပန်အမူအရာကို မြင်တွေ့ရတာကတော့ Gatsby ကို ပြန်မြင်ယောင်မိစရာပဲလို့ ဆိုကြတယ်။
ဒါရိုက်တာ - Alan Taylor
ထုတ်လုပ်သူ - Kevin Feige
ဇာတ်ညွှန်း - Christopher Yost, Christopher Markus, Stephen McFeely
သရုပ်ဆောင်များ - Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston
Marvel Comics ဇာတ်ကောင် Thor ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို အင်္ဂလန်အရှေ့တောင်ပိုင်း ဆာရေး၊ နောက်ထပ် အိုက်စ်လန် နဲ့ လန်ဒန်မြို့တွေမှာ ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ The Avengers တွေရဲ့ အရေးတကြီးအဖြစ်အပျက်တွေပြီးဆုံးသွားပြီး တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါ .. သော (Chris Hemsworth) ဟာ စကြာဝဠာကြီးထက်သက်တမ်းကြီးရင့်နေတဲ့ လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်၊ ပဟေဠိကြွယ်လွန်းလှတဲ့ရန်သူရဲ့လက်ကနေ သူ့နယ်ပယ်တွေကို ကာကွယ်ရပါမယ်။ သော က Asgard နယ်က မင်းသာတစ်ပါးပါ။ သော ရဲ့ အချစ်ကလေး ဂျိန်းက ကြယ်တွေ ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို လေ့လာနေတဲ့ ရူပနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်လေး၊ သော က ဂျိန်းကို မြေကမ္ဘာကနေ Asgard နယ်ဆီအရောက်ခေါ်လာခဲ့တာတဲ့။ ဂျိန်းမှာ နားလည်ရန်ခက်လှတဲ့စွမ်းအင်တစ်မျိုး ကူးစက်စွဲကပ်ခံနေရတယ်။ ပထမဇာတ်လမ်းတွဲ (Thor and The Avengers) မှာ တော့ သော ဟာ ကူးခတ်သွားလာစရာရေမရှိ၊ ကုန်းမြေပေါ်မှာမောဟိုက်နေတဲ့ မြေကမ္ဘာက ငါးတစ်ကောင်လိုပဲ လို့ ထုတ်လုပ်သူ Kevin Feige က ပြောပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ ဂျိန်းက Asgard နယ်မှာ ရေနဲ့ ဝေးနေတဲ့ ငါးလေးတစ်ကောင်ပေါ့ လို့ ဆိုတယ်။ ဂျိန်း အဖြစ် Natalie Portman က သရုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ က ပြသခဲ့တဲ့ Thor ရဲ့ အဆက်၊ Marvel ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ ရှစ်ကားမြောက်ဇာတ်လမ်းတွဲပါ။ သော က ဂျိန်းကို ကတိပေးတယ် “အမှောင်ကမ္ဘာကြီးပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါစေ၊ အားလုံးကို ကယ်ဆယ်ဖို့နည်လမ်းတစ်ခု ငါရှာမယ်” တဲ့။
Yati Magazine, November, 2013
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, October 29, 2013 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
အသားကင် (Grill meat) ယဉ်ကျေးမှုခေတ်ကြီးထဲရောက်နေပြီလို့တောင် ပြောရတော့မလားပဲ။ အကင်အမျိုးအစားစုံရောင်းချတဲ့ ဆိုင်ကြီး၊ ဆိုင်သေးလးတွေ ဟိုဟိုဒီဒီများလွန်းလှပါတယ်။ သုတေသနပညာရှင်တွေအကြံပြုနေကြတာတော့ အကင်တွေနဲ့ ကင်ဆာ ချိတ်ဆက်မှုရှိနေသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ မျက်ခုံးလှုပ်စရာအန္တရာယ်ကို ဖြတ်တောက်ပြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရှိနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုပြီးညီညွတ်တဲ့ အကင်တွေ ရွေးချယ်စားနိုင်မယ့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်းလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
well-done ဘာဂါ well-done hotdog တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အကြိုက်တွေဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးကို သေသေချာချာဖတ်ရတော့မှာပါ။ အကျက်လွန်အောင်/ တူးချစ်နေအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အသားဟာ ပန်ကရိယကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးစေနိုင်တယ်တဲ့။ University of Minnesota လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီလို တူးချစ်နေအောင် ကင်ထားတဲ့အကျက်လွန်အသားတွေ မှန်မှန်စားသုံးတဲ့အလေ့အထရှိနေတဲ့ လူပေါင်း ၆၂၀၀၀ ကျော်ကို ကိုးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း လေ့လာခဲ့ကြတာပါ။ ဘာကြောင့်များလဲ။ အသားတွေကို အပူချိန်မြင့်မြင့်မှာ ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ HCAs (heterocyclic amines) နဲ့ PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) စတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ အဲဒီ ကာဆီနိုဂျင်(ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အရာ) တွေဟာ DNA ထဲမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ကုန်ပြီး ကင်ဆာရောဂါဆီ ဦးတည်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
အဲဒါကြောင့် အသားကို ကင်တော့မယ်ဆိုရင် အဆီ၊ ဂျုစ်အရည်ဓာတ်နည်းတဲ့/ မပါတဲ့ အသားမျိုးရွေးချယ်ပါ။ အသားမှာရှိနေတဲ့ အဆီ၊ အရည်ဓာတ်တွေဟာ မီးကင်တဲ့အခါ မီးတောက်တွေ လင်းဖြာထတောက်စေတယ်။ မီးခိုး၊ မည်းမည်းတွေပိုပြီး အသားမှာကပ်ငြိစေတယ်။ အဲဒီ တူးချစ်နေတဲ့မီးကျွမ်းထားတဲ့အမည်းသားလေးတွေဟာ ကာဆီနိုဂျင်ဖြစ်ပေါ်စေသတဲ့။ တူးချစ်နေတဲ့မီးကျွမ်းအသားတွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ။ အဲဒါဟာ HCAs ကို ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ် လို့ Nutrition Action Healthletter က ဆိုတယ်။ အကျက်လွန်အောင်ကင်ထားတဲ့အသားကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် မစားခင်မှာ အဲဒီ တူးချစ်နေတာလေးတွေ သတိထားရှင်းပစ်ပေးပါ။
အသားကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းအောင် ပြင်ဆင်ပါ
ဆီ၊ ဝိုင် အမွှေးအကြိုင်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ marinade အရည်မျိုး မချက်ပြုတ်မီစိမ်ပါတဲ့။ သုတေသနပညာရှင်တွေကတော့ ဘာကြောင့်လည်းအတိအကျမပြောနိုင်ပေမယ့် marinated အသားမျိုးဟာ ကာဆီနိုဂျင်တွေကိုယ့်ဆီရောက်မလာအောင် အဆီးအတားပုံစံမျိုးဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အမေရိကန်ကင်ဆာသုတေသနအဖွဲ့ကပြောတာက အသားကိုမချက်ပြုတ်မီအဲဒီအရည်နဲ့ အနည်းဆုံး မိနစ်၃၀ နှပ်ထားတာဟာ HCAs ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချပေးတယ်တဲ့။ marinade အမျိုးအစားပေါ်မှာတောင်မူတည်နိုင်သေးတယ်။ Kanas State University နဲ့ Food Science Institue က တွေ့ရှိခဲ့တာက ကရစ်ဘီယံ Marinade နဲ့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အသားပျဉ်ကို ကင်တာ/ ချက်ပြုတ်တာဟာ HCAs ကို ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းထိတောင် လျှော့ချပေးနိုင်တယ်။ herb marinade ကတော့ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ Southwestern marinade အရောအနှောကတော့ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးပါတယ်။
အသားကိုကင်တဲ့အချိန်ကြာတာဟာလည်း ကာဆီနိုဂျင်ဖြစ်ပွားဖို့ ဦးတည်နေတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အချိန်ပိုကြာကြာလေး ကင်လေ မီးတောက်တွေနဲ့လောင်ကျွမ်းပြီး မီးကျွမ်းတာတွေပိုများနိုင်တာကြောင့်ပါ။ အဲဒါကြောင့် အချိန်ပေးပြီးကင်ရတဲ့ ကြက်သား/ အမဲသားမျိုးထက် ငါးကို ရွေးချယ်တာပိုကောင်းတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တံစို့ထိုးပြီးကင်နိုင်အောင် အသားတုံးသေးသေးလေးတွေဆိုလည်း ကင်ချိန်နည်းစေတာကြောင့်သင့်တော်ပါတယ်။ အမေရိကန်ကင်ဆာသုတေသနအဖွဲ့က အကြံပြုချက်တစ်ခုကလည်း အသားတွေကို မကင်ခင်မှာ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုထဲမှာ အသားကို အနည်းငယ်ကျက်သွားစေတာဟာလည်း HCAs ကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျစေတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာ အနည်းငယ်ချက်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းထုတ်ယူပြီးကင်ရပါမယ်။ တဝက်တပျက်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အသားကို အချိန်ကြာကြာထားလိုက်ပြန်ရင်လည်း ဗက်တီးရီးယားနဲ့ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ pathogen တွေရှိလာနိုင်ပြီး အဲဒီအသားတွေစားတဲ့အခါ ဖျားနာနိုင်သေးတယ်။
hotdog နဲ့ အစာသွပ်အသားချောင်း (ကြက်အူချောင်း/ ဝက်အူချောင်း)တွေကို ရှောင်သာရှောင်ပါ။ သူတို့ရဲ့အရသာက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစားဖွယ်ရာလေးတွေပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာ၊ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်စေသတဲ့။ အူမကြီးနဲ့ စအိုကင်ဆာဖြစ်နှုန်းတိုးစေတယ်လို့ အမေရိကန်ကင်ဆာသုတေသနအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အပူရှိန်သိပ်မများဘဲ ကင်ပါ။ အပူရှိန်များလွန်းတာဟာ အသားကို မာသွားစေပြီး မီးကျွမ်းစေတယ်၊ တူးချစ်သွားစေတယ်။ အသားကင်တဲ့သံပြား/စင် တွေမှာ ကပ်နေတဲ့ဆီတွေနဲ့ မတိတွေ့အောင် အသားရဲ့ အောက်ခြေမှာ အရံအတားထားပေးပါ။ ကင်မယ့် အသား/ အသီးအရွက်တွေနဲ့ အသားကင်စင်ကြားမှာ aluminium foil လေး ဖြန့်ခင်းထားနိုင်ပါတယ်။ အပေါက်လေးတွေတော့ ထိုးဖောက်ထားပေးပါ။ အသားနဲ့ အသီးအရွက်တွေက ထွက်လာမယ့်အဆီတွေ အိုင်မနေနိုင်အောင်လို့ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ မီးကျွမ်းအကင်လေးတွေဖြစ်မသွားနိုင်တော့ပါဘူး။
အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကင် ဆိုရင်ရော
အကင်အရသာကိုမှ စွဲလမ်းသူတွေအတွက် အသားတွေနဲ့ အသီးအရွက်တွေနဲ့ နေရာလဲလိုက်ရတော့မှာပါ။ ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကိုလျှော့ချချင်တယ်ဆိုရင် အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဘာဂါ အားလုံးဟာ စိတ်ချရတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေပါပဲ။ ကင်ဆာတွေကို လျှော့ချတိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ phytochemicals တွေဟာ အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲမှာ ဆုကြေးအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်တဲ့။
ကိုယ့်ရဲ့ အကင်လေးတွေ ကင်မယ့်စင်ကို တစ်ခါအသုံးပြုပြီးတာနဲ့ မျက်နှာပြင်စင်အောင် ခြစ်ထုတ် ပွတ်တိုက်ကာ ဆေးကြောရပါမယ်။ အသားကင်ပြီးကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကာဆီနိုဂျဲနစ်အကြွင်းအကျန်တွေဟာ နောက်တစ်ကြိမ်ကင်တဲ့အခါမှာ အသေအချာအနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တယ်။ ကျန်ရစ်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အကင်လေးတွေဆီ ခုန်ကူးလာလိမ့်မယ်။
ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်းပြုလုပ်ပြင်ဆင်/ ကင်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ စားချင်စဖွယ်အကင်လေးတွေဟာ ကင်ဆာလည်းကင်းဝေးစေမယ်။ အရသာလည်းရှိလှတဲ့ အသားကင်၊ အသီးအရွက်ကင်လေးတွေဖြစ်နေမှာပေါ့။ ။
Source :7Guidelines for Healthier Grilling by Reader's Digest
Posted by PhyoPhyo at Monday, October 28, 2013 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ဟာ ဟဲလိုးဝင်းနိုက်(Halloween Night)တဲ့။ သရဲတွေရဲ့ညလို့ဆိုကြသတဲ့။ အဲဒီ သရဲည ယဉ်ကျေးမှုဟာ အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နေရာတစ်နေရာကနေ စိမ့်ဝင်စီးမြောလာခဲ့တဲ့ ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုပဲ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲပုံစံမျိုးနဲ့ ဆင်နွှဲပျော်ရွှင်ကြတဲ့ မြန်မာလူငယ်လေးတွေရှိလာကြပါပြီ။ ဟဲလိုးဝင်းဆိုတာကတော့ တကယ်တော့ ကမ္ဘာ့ ရှေးအကျဆုံးအားလပ်ရက်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲပါ။ ဒီနေ့ထိလည်း ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ ဆင်နွှဲကြတဲ့တိုင်းပြည်အများအပြားရှိနေပါတယ်။ မက္ကဆီကို နဲ့ တခြား လက်တင်အမေရိကန်တိုင်းပြည်တွေမှာ သေလွန်သူများနေ့ Dead of the Day (Dia di los Muertos) ကို သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်သူတွေနဲ့ ဘိုးဘွားတွေကိုရည်မှန်းပြီး ဆုတောင်းပွဲလုပ်ကြတဲ့သဘောပါ။
Posted by PhyoPhyo at Monday, October 28, 2013 Labels: ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို
TakeaView Landscape Photographer of the Year ဆုရ Derbishire ဓာတ်ပုံဆရာ Tony Bennet ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြိုက်လို့ ဒီမှာတင်လိုက်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်အနောက်မြောက်ပိုင်း Cumbria ဒေသ Crummock Water ရေကန်ရဲ့ သဘာဝရှုခင်းအလှပါ။
“ရှင် … ဒီဝတ်စုံကို လဲလိုက်၊ မြန်မြန်လေးနော်”
နက်ပြာရောင် ကျောကွဲ၊ ဇစ်တပ်ဘလောက်စ်နဲ့ဒူးအထက်ခပ်တိုတိုစကပ်လေးဝတ်ထားတဲ့ နာစ့်မလေးကမ်းပေးလာတဲ့ ဆေးရုံကဝတ်စုံကို လက်လှမ်းယူရင်း ရင်မှာ ထိတ်ခနဲ လှိုက်ခုန်မိပြီ။
အဖြူပေါ်မှာ အပြာကွက်ခပ်ဖျော့ဖျော့လေးတွေပါတဲ့ဂျာစီပုံစံဝတ်စုံကို ခပ်မြန်မြန် စွပ်ချလိုက်ရင်း နတ်စ်မလေးခေါ်ဆောင်ရာဆီ ခြေလှမ်းတွေပြင်ရပြီ။ အခန်းတံခါးဝနားမှာ သူမလို ဂျာစီဒူးအထက်တဝဲဝဲ ခပ်ပွပွဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦး စောင့်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းဖိုင်တွေ ပိုက်ပွေ့ကိုင်ယူလာခဲ့တဲ့ နတ်စ်မလေးရဲ့ခြေလှမ်းတွေက သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ ရှေ့ကဦးဆောင်တယ်။ ဓာတ်လှေကားရှိရာဆီ။ နတ်စ်မလေးရဲ့ လက်က နံပါတ်တစ်ခုဆီကိုလက်လှမ်းလိုက်မှာပေါ့။ ဘယ်နံပါတ်၊ ဘယ်အထပ်လည်း စိတ်တွေဝေဝါးနေလို့ သူမ မသိလိုက်ပါ။ အနည်းငယ် တုန်လှုပ်ထိတ်လန့်နေခဲ့ပြီ။
ကမ္ဘာကြီးလှပဖို့ ချစ်ဖူးခဲ့သမျှ အချစ်တွေမျှဝေကြစို့………………..
Posted by PhyoPhyo at Sunday, October 27, 2013 Labels: စုမီအောင်ရဲ့စာ
အချစ်တွေမျှဝေကြစို့..ကမ္ဘာကြီးလည်း လှပဖို့…တို့ရဲ့လက်တွေနဲ့ တွဲလို့လှမ်းခေါ်မယ်၊ မေတ္တာအလင်းရောင်များ ဖြန့်ဝေကြစို့…
ဟော်လိုဂစ်တာတစ်လက်ကိုအကျအနပွေ့ပိုက်ကာ သီဆိုနေသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်။ အသံက ပျောင်း နွဲ့မနေ၊ ဒါပေမဲ့ ကရုဏာက အားကြီးစွာ ရစ်ခွေစီးဝင်နေသည်။ ကိုယ့်ခြေလှမ်းတွေ ရပ်တန့်သွားသည်။ အောက်မေးရိုး ပြုတ်ကျသွားသည်။ ခေါင်းပေါ်က ဦးထုပ် ဖတ်ခနဲ ကျွတ်ကျသွားသည်၊ ကျောမှာလွယ်ပိုးလာ သည့် ကျောပိုး အိတ်က လျှောခနဲပြုတ်ကျသွားသည်။ ကိုယ်ဆောင်ကြဉ်းခဲ့ သမျှ အရာအားလုံး ကိုယ့်ဆီက အကုန်အစင်ပြုတ်ကျကုန်သည်။ နောက်ဆုံး ချိုမြိန်ဖွယ်အရသာအပြည့်နဲ့ပန်းသီးတစ်လုံး ဘာထူးလဲ ……..။ အဲသည်နေ့က ပိုပို နဲ့အတွေ့မှာ ပန်းသီးတစ်လုံးစားသုံးဖို့ ကိုယ် မေ့လျော့သွားခဲ့သည်။
Happy Thidinkyut for all Friends !
Posted by PhyoPhyo at Saturday, October 19, 2013 Labels: ဟိုဟို ဒီဒီ
သီတင်းကျွတ်မှာ မိဘနှစ်ပါး၊ ဆရာသမားအားလုံး ရည်မှန်းကန်တော့ပါတယ်။
Happy Birthday Eminem "17 October"
Posted by PhyoPhyo at Thursday, October 17, 2013 Labels: ဘာသာပြန်သီချင်း, အမ်မီနမ်ရဲ့ တေးဆိုတဲ့ငှက်
Eminem မွေးနေ့အမှတ်တရ ၂၀၀၉ လောက်က ရေးဖူးခဲ့တဲ့ သီချင်းစာသားလေးပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
"Happy Birthday Eminem"
ကျွန်မ သိပ်ကြိုက်တဲ့ Eminem ရဲ့ Mockingbird ဆိုတဲ့ ရက်ပ်သီချင်းဟောင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ အဲဒီသီချင်းကို ပထမဆုံးနားထောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီး ခုချိန်ထိ ဘယ်အချိန်နားထောင်၊ နားထောင် ကြိုက်နေတုန်းပါပဲ။ ရက်ပ်စစ်စစ်ကြီးတွေ နားထောင်လို့မရပေမဲ့ ဒီလူတွေရဲ့ ဂီတက လျှော့တွက်လို့မရလှဘူး။ အမ်မီနမ်ရဲ့ သီချင်းစာသားတွေ လိုက်ဆိုကြည့်မိတဲ့သူတွေ ဒီပိုစ့်ဖတ်မိတဲ့သူထဲမှာပါရင် အသေအချာ နားလည်မှာပါ။ ဘယ်အချိန်အသက်ခိုးပြီး ရှုသွားလိုက်မှန်းမသိနိုင်လောက်အောင်ကို ဆိုသွားတာများ အင်မတန်ပါးပါးနပ်နပ်ရှိလှတဲ့ ရက်ပ်သမားတွေပါပဲ။ ကျွန်မ ဂီတကို တိတိကျကျကြီး နားမလည်လှပါဘူး။
သီချင်းနားထောင်လို့ကောင်းရင် အကုန်ကြိုက်လိုက်တာပဲ။ ဂီတအမျိုးအစားတောင်မရွေးမိဘူး။
Mockingbird ကိုတော့ အတီးစ၀င်လာတာကနေ စပြီးကြိုက်တာ။ အတီးကိုစကြိုက်ပြီး စာသားတွေဖတ်ကြည့်တော့ တော်တော်သဘောကျသွားတာနဲ့ပဲ။
Mockingbird အကြောင်း ဟိုဟိုဒီဒီမွှေနှောက်မိတာလေး လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Mockingbird ဆိုတာ အမေရိကန်မြောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ တေးဆိုငှက်တစ်မျိုးပါတဲ့။
ဒီငှက်က တခြားငှက်တွေရဲ့ အသံမျိုးတုပပြီးလိုက်ဆိုတတ်သေးတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ သူ့ကို ပြောင်ချော်ချော်ငှက်လို့အမည်ပေးထားတာထင်ပါရဲ့။
Mockingbird သီချင်းဟာ အမ်မီနမ် ရဲ့ Encore အယ်လ်ဘမ်ထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ US Music Chart မှာ နံပါတ် 11၊ UK မှာတော့ နံပါတ်4အဆင့်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ Best Rap Solo Performance အတွက် ဂရမ်မီဆုဇကာတင်အဆင့်ရွေးချယ်ခံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ Kanye West ရဲ့ Gold Digger ကိုတော့မကျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီသီချင်းဟာ အမ်မီနမ်က သမီးလေး ဟေလီဂျိတ်ဒ်ကို ရှင်းလင်းပြောပြနေဟန်ဆိုထားတာပါ။ ဟေလီရဲ့မေမေ ကင်မ်မက်သားစ်နဲ့ အမ်မီနမ်တို့ ရုန်းကန်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်း ညည်းတွားရေရွတ်ထားသေးတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးမှာအမ်မီနမ်ရဲ့ ဗရုတ်ဗရက်ဖစ်နေခဲ့တဲ့ဘ၀ကို ဆက်တိုက်ပြောနေခဲ့တယ်။ ကင်မ်ကလည်း အဝေးကိုထွက်သွားလိုက်ပြီ၊ ပြဿနာတွေနဲ့ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်နေခဲ့တဲ့ အမ်မီနမ်က သမီးလေးဟေလီကိုပြောတယ်။ “ဒက်ဒီ ရောက်နေပြီပဲ အားလုံးကောင်းသွားတော့မှာပါ” တဲ့
သီချင်းထဲမှာ သမီးလေးလိုချစ်တဲ့တူမလေး အယ်လီနာကိုလဲ စကားတွေပြောထားပါသေးတယ်။ ဗီဒီယိုမှာတော့ ဟေလီနဲ့လိုင်နီတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကို ခပ်ဝါးဝါးလုပ်ထားတယ်။ အမ်မီနမ်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်တဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုချပြထားတဲ့ သီချင်းပါ။ အမ်မီနမ်ကတော့ ယောင်ဝါးဝါးလုပ် ငြင်းဆိုချင်ဟန်နဲ့ “ဒါ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ” လို့ဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီသီချင်းဆိုရင်း ငိုကြွေးခဲ့ရတာတော့ ၀န်ခံထားတယ်။ သီချင်းဆုံးခါနီးမှာ Don’t F--- with Dad လို့ဆိုထားပေမဲ့ Mockingbird single ခွေမှာ Parental Advisory Sticker ကပ်မထားပါဘူး။ သီချင်းအဆုံးမှာဖြစ်တာရယ်၊ တခြားအမ်မီနမ်ရဲ့သီချင်းတွေမှာ အဲဒီစကားလုံးတွေ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပါတတ်တာကြောင့် ဒီသီချင်းကိုတော့ Recording Industry Association of America (RIAA)က ဥပေက္ခာပြုထားလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(Mocking Bird သီချင်းစာသားကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ထားပါတယ်)
တခါတရံ အရာခပ်သိမ်းကို သမီးလေးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ခက်နေမှာကို ဒက်ဒီသိပါတယ်။
“ဟေး ဒက်ဒီ မင်းကိုအမြဲဘာပြောလဲ”
စစ်သားငယ်လေးရယ် ကျောကိုဆန့်ဆန့်မတ်မတ်ထားရင်း၊ သမီးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုလည်း ခပ်မဲ့မဲ့ကွေးညွှတ်မနေဘဲ တင်းတင်းစေ့ထားပေးပါ။ ဘာကြောင့်ငိုနေမှာတဲ့လဲ။
ဒက်ဒီ မင်းအနားမှာရှိနေပြီပဲ။ ဟေလီ... ဒက်ဒီသိတာပေါ့၊ မင်းရဲ့မေမေကို လွမ်းနေမယ်။ ပြီးတော့ ဒက်ဒီ့ကိုလည်း လွမ်းနေမှာ ဒက်ဒီသိတာပေါ့။
ဒက်ဒီ သွားခဲ့ရတာက ဒက်ဒီဘယ်တော့မှ မရခဲ့ဘူးတဲ့ ဘ၀မျိုး သမီးကိုပေးချင်လို့ပါ။
သမီးပြုံးနေတဲ့အချိန်၊ ရယ်မောနေတဲ့အချိန်မှာတောင် စိတ်ထဲမှာတော့ ၀မ်းနည်းအားငယ်နေမှာ
ဒက်ဒီသိနိုင်တယ်။ သမီးရဲ့မျက်လုံးတွေထဲ ဒက်ဒီကြည့်ရင်း အတွင်းစိတ် ဟိုး ... နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနေရာမှာ သမီး ငိုချင်နေတယ်ဆိုတာ ဒက်ဒီမြင်နေနိုင်ပါတယ်။ သမီးကြောက်ရွံ့နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဒက်ဒီရှိမနေနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ကဲ ထပ်ထပ်ပြီး ငိုမနေပါနဲ့တော့၊ မျက်ရည်တွေကိုသုတ်လိုက်ပါတော့၊ ဒက်ဒီ မင်းအနားကို ခုရောက်လာပြီ၊
ဒက်ဒီတို့ အတူတူ ဒါတွေကိုကျော်ဖြတ်ကြမယ်။
လိုင်နီ ... အန်ကယ်က အရူးပဲမဟုတ်လား၊ ရူးတယ်ပဲထားပါဦး မင်းကိုလည်း သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ရေရေလည်လည် နားလည်သဘောပေါက်ထားရမယ်။
ကမ္ဘာကြီးလှုပ်ခါနေသလို ဒက်ဒီတို့ဘ၀တွေဟာလည်း ရီဝေယိမ်းထိုးနေရတာပါပဲ။
ဒါတွေက သမီးတို့ကို နားရှုပ်စေမှာ ဒက်ဒီသိတယ်။ ဒက်ဒီက အမြဲလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတယ်၊ မင်းတို့ မာမီကလည်း သတင်းတွေပဲ ထိုင်စောင့်ကြည့်နေရတယ်။
သမီးတို့ကို အရိပ်ကောင်းကောင်း အုပ်မိုးပေးဖို့ကြိုးစားလိုက်တိုင်း ပိုပိုပြီး လုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲလာတာချည်းပဲ။
ဒက်ဒီ့ရဲ့ ခုလို ကို့ရို့ကားယားပုံပမ်းမကျနတဲ့ ဘ၀ကို သမီးတို့ကို မမြင်မတွေ့စေချင်ပါဘူး။ ခုတော့ မရှောင်နိုင်ပါဘူး၊ မင်းတို့ရဲ့ မာမီနဲ့ဒက်ဒီတို့အခြေအနေတွေ ပိုပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေပြီ။ ဒက်ဒီတို့က ဆယ်ကျော်သက်တွေလို ကတောက်ကဆဖြစ်ခဲ့ကြတာကို သမီးတို့ မြင်တွေ့ခဲ့ကြပြီ။ အရာရာတိုင်းဟာ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်လာတတ်တာပဲ။
သမီးရေ၊ ဘယ်တုံးကမှ ဒီလိုမရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ မင်းရဲ့မာမီနဲ့ ဒက်ဒီတို့ အခြေအနေကောင်းကို မထိမ်းသိမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒက်ဒီတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ဘာတဲ့လဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး အိပ်လိုက်ကြပါဦး၊ တစ်နေ့တော့ ဒက်ဒီတို့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ကြမှာပါ။ အဲဒီနေ့ကျရင် ဒါဟာ အိမ်မက်တွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
နှုတ်ဆိတ်နေတဲ့ သမီးလေးရေ၊ တိတ်တိတ်လေး မငိုကြွေးနေပါနဲ့တော့၊
ဒက်ဒီ - မင်းကို ထွေးပွေ့ဖို့ ဒီည အရောက်လာခဲ့မယ်၊
ခုတော့ မာမီ မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဒက်ဒီတို့ မသိကြဘူးမဟုတ်လား၊
ဒက်ဒီတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်မှာ စူးစူးနစ်နစ် ခံစားနေရတာကိုတော့ ဒက်ဒီတို့ခံစားမိကြတာပဲ။
ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရတဲ့သမီးအလှလေးရေ- ဒက်ဒီ ကတိပေးနိုင်တယ်ကွဲ့၊
ဒါ ရယ်စရာပါပဲ .....
ပြန်သတိရမိပါသေးရဲ့ တစ်နှစ်ကပေါ့၊ ဒက်ဒီ့မှာ ပိုက်ဆံ မရှိဘူး။ ခရစ်စမတ်ကာလဆိုတော့ မာမီက ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို သစ်ပင်မှာ သူ့ဘာသာချိတ်ဆွဲရင်း ဒက်ဒီပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒက်ဒီကတော့ တကယ့်ကို ဘာဆိုဘာမှ မ၀ယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီ ခရစ်စမတ်ကို ဒက်ဒီမမေ့ဘူး၊ ဒက်ဒီက တေလေကြမ်းပိုးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလို့ ခံစားနေရပြီး ခရစ်စမတ်ပင်ရှေ့ တစ်ညလုံးထိုင်ငိုနေခဲ့ရတယ်။ ဒက်ဒီ့မှာ အလုပ်တော့ရှိပါရဲ့၊ ဒက်ဒီ့အလုပ်က သမီးနဲ့ မာမီ စားစရာဟင်းလျာတွေ စားပွဲပေါ်တင်ပေးရတဲ့အလုပ်ပဲ မဟုတ်လား၊
အဲဒီအချိန် ဒက်ဒီတို့ရဲ့အိမ်တွေက မလုံခြုံတော့ တံခါးတွေရိုက်ချိုးပြီး လုယက်မယ့်သူတွေ ကျူးကျော်လာကြပါလေရော၊ သမီးရဲ့မာမီက ၀က်ရုပ်စုဗူးလေးလုပ်လို့ ပိုက်ဆံတွေစုထားတယ်။ အဲဒီပိုက်ဆံတွေဟာ သမီးကြီးလာရင် ကောလိပ်ပို့မယ့် ပိုက်ဆံတွေ၊ ဒေါ်လာတစ်ထောင်ခန့်ရှိမှာပပဲ။ လူဆိုးတွေ ... အားလုံးယူသွားကြတယ်၊ ဒက်ဒီသိပါတယ်။
အဲဒီ အဖြစ်အပျက်ဟာ မာမီ့ကို စူးစူးနစ်နစ် ထိခိုက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး မာမီနဲ့ ဒက်ဒီ ဝေးကွာဖို့ စတင်လာခဲ့ကြတာပါပဲ။ မာမီနဲ့ ဒက်ဒီတို့ တချိန်လုံး ကတောက်ကဆ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့ သမီးရဲ့မာမီက Chalmers က အိပ်ခန်းတစ်ခန်းပဲပါတဲ့ တိုက်ခန်းကို ပြောင်းနေသလို ဒက်ဒီကလည်း မာမီနဲ့ဝေးရာ တခြားတစ်နေရာဆီ၊ Novora က 8 Mile ဆီ ဒက်ဒီ ထွက်သွားလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဒက်ဒီရဲ့ စီဒီ ကိုယူပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုသွားတယ်။ Dr.Dre နဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်တယ်။
မာမီနဲ့သမီး ဒက်ဒီ့ကိုတွေဖို့လိုက်လာကြတယ်ဆိုတာဒက်ဒီသိတယ်၊ ဒက်ဒီအလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ဖို့ရှိတယ်၊ အဲဒီတော့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ ဒက်ဒီ့ကို မာမီကစွန့်ခွာခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သမီး ဒက်ဒီ့ကို တီဗီ မှာ ဘွားခနဲမြင်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လား၊
မာမီကတော့ ဒါကို မကြိုက်လှပါဘူး၊ သမီးနဲ့လိုင်နီကတော့ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်သေးဘူး၊
ဒက်ဒီက လိမ့်နေတဲ့ဂေါ်လီတစ်လုံးလိုပဲ၊ မာမီကလည်း ဒက်ဒီနဲ့ဝေးကွာစေမယ့် အကြောင်းတရားတွေပဲ သူ့စိတ်အာရုံမှာ တချိန်လုံးမွေးမြူနေတော့တယ်။
သမီးလေး - ဒက်ဒီ တကယ် စိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်၊
ဒက်ဒီ အလုပ်နဲ့သက်သေပြဖို့ ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ပထမဆုံးလက်တစ်ဘက်ကို လက်လွှတ်မခံနိုင်ဘူး၊
ဒက်ဒီလုပ်ချင်သမျှ အရာအားလုံးဟာ သမီးလေး ဂုဏ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပါ။
အခုတော့ ဗလာဟင်းလင်း အိမ်ထဲမှာထိုင်ရင်း အတိတ်ကို ပြန်သတိရနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်။
သမီး ငယ်ငယ်က ပုံလေးတွေကြည့်ရင်း သမီး ဘယ်လောက်တောင်ကြီးပြင်းလာပြီလဲဆိုတာ မြင်ချင်လှပါပြီ၊ သမီးတို့ဟာ ညီအစ်မတွေလိုဖြစ်နေကြပြီလား၊ မှန်းဆကြည့်လိုက်ပါရစေဦး။
သိပ်လှတဲ့ သမီးငယ်လေးရေ ဒက်ဒီရောက်နေပြီ၊
လိုင်နီ ... မင်းကိုလည်း ပြောချင်ပါရဲ့ ... ဒက်ဒီ မင်းတို့အနားရောက်လာခဲ့ပြီ။
ရှုး- တိတ်တိတ်နေကြပါ - မာမီသွားတာ ခဏတာပါ။
ဟေလီ - သမီးသာအလိုရှိမယ်ဆိုရင် ဒက်ဒီ သမီးအတွက် တေးဆိုငှက် ပြောင်ချော်ချော်လေး
သမီးအတွက် ကမ္ဘာကြီးကိုလည်း ပေးပါမယ်၊
စိန်လက်စွပ်တစ်ကွင်း သမီးအတွက် ၀ယ်ပေးဦးမယ်၊
သီချင်းတစ်ပုဒ်လည်း သမီးအတွက် ဆိုပြပါရစေဦး၊
သမီးရဲ့အပြုံးကို မြင်ရဖို့ ဒက်ဒီ ဘာမဆို လုပ်ဝံ့ပါတယ်။
အဲဒီလက်စွပ်က စိန်ပွင့်လေး တလက်လက်တောက်ပမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်-
အဲဒီ ငှက်ပြောင်ချော်လေးရဲ့ လည်ဂုတ်ကိုချိုးပစ်မယ်ကွဲ့၊
ပြီးတော့ ရတနာဆိုင်ကိုလည်း ပြန်သွားလိုက်မယ်။ ခပ်မွဲမွဲလက်စွပ်ရောင်းလိုက်တဲ့လူကို
ရွှေချိန်တွေပဲ တချိန်လုံးမဆန့်မပြဲ ဆက်ပြီးဝါးမျိုနေဖို့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပစ်ခဲ့မယ်။
ဟား ဟား ... ဒက်ဒီ့ကို လာမညိလိုက်ပါနဲ့။
Posted by PhyoPhyo at Thursday, October 10, 2013 Labels: ဖြိုးဖြိုးဖတ်ဖို့, အထွေထွေမှတ်စု, မေမေ့ရဲ့စာ
ရှေးမြန်မာ လူမျိုး တွေဟာ ၁၂လရာသီ ပွဲတော်များနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီပီသသ ဗုဒ္ဓဘုရား၏ အဆုံးအမ အောက်မှာ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားစွာ အေးအေးချမ်းချမ်း ရိုးရိုးသားသား ရောင့်ရဲတင်းတိမ် နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ သီတင်းကျွတ်လဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာ ၀င် ရဟန်းတော်များ ၃လတိုင်တိုင် ကျောင်းတွင်းမှာပဲ ၀ါဆိုနေထိုင်ခဲ့ကြရာက ကင်းလွှတ်ခဲ့တာကို ရည်ညွှန်းဖေါ်ပြနေတာပါ။ ရာသီက တူရာသီ ၊ အာသာဝတီကြယ်နဲ့ စန်းယှဉ်မွန်းတည့်တယ်လို့ အဆိုရှိတယ်။ရာသီပန်းကတော့ Nymphaea Lotus ခေါ်တဲ့ ကြာဖြူပန်းပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ တာသတိံသာ နတ်ပြည်မှာ မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သန္တုသီတနတ်သားကို အမှူးပြုပြီး အဘိဓမ္မာတရားကို ၀ါတွင်း သုံးလတိုင်တိုင် ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ကို အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ လူနတ်ဗြဟ္မာတို့ စီချယ် ပြုလုပ်အပ်တဲ့ ရွှေစောင်းတန်း ၊ငွေစောင်းတန်း စသည်တို့ဖြင့် နတ်ဗြဟ္မာတို့က ခြံရံပြီး အလယ် ပတ္တမြားစောင်းတန်းမှ သင်္ကဿနဂိုလ်ပြည်သို့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ ဆင်းသက်ခဲ့တာဖြစ်လို့ မြတ်ဘုရား ဆင်းသက်ကြွမြန်းရာ လမ်းတလျှောက် လူတို့က ရောင်စုံ မီးများထွန်းညှိ ပူဇော်ခဲ့ကြတာပါ။
ထိုမှသည် နှစ်စဉ် ကျင်းပခဲ့ကြတာမို့ သီတင်းကျွတ် ဆီမီးပူဇော်ပွဲ ဟာ မြန်မာတို့ရဲ့ ၁၂လရာသီ ပွဲတော်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့။တာဝတိံသာ နတ်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ စူဠာမဏိ စေတီတော်ကိုလည်း ရည်စူးပြီး မီးရှူး မီးပန်းများပြစ်လွှတ် ပူဇော်ကြသေးတာပါ။ဗုဒ္ဒမြတ်စွာရဲ့ အဆုံးအမအောက်မှာ ကျိုးနွံ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာများဟာ သီတင်းဝါလ ကင်းလွှတ်ခဲ့တဲ့ သီတင်းကျွတ်လမှာ မိဘ ဖိုးဖွား သက်ဝါကြီးသူများကို မင်္ဂလာ တရားတော်နှင့်အညီ မန်မာနလျော့ချလို့ ကံတော့ခဲ့ကြတာဟာလည်း ချစ်စရာ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့တခုအဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ တဦးကို တဦး လေးစား ချစ်ခင်ခြင်း၊မေတ္တာဖြင့် သနားစာနာခြင်း ။ကူညီ ရိုင်းပင်းခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် အမျိုးကောင်းသားသမီးတို့ရဲ့ ထူးမြတ်တဲ့ စိတ်နေစရိုက်ကိုလည်း ဖေါ်ပြရာ ရောက်ပါတယ်။ တမျိုးပြောရရင် အမျိုးဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ရာရောက်ပါတယ်။ရဟန်းတော်များအချင်းချင်းလည်း ပ၀ါယဏာ ပွဲ ပြုလုပ် ကာ အပြစ်ရှိက ဖြေလျော့ပေးပါရန် ပန်ကြားရ တာမို့ ဗုဒ္ဒဒဿန အယူအဆဟာ အလွန်သိမ်မွေ့ ထူးခြားလှပါတယ်။
ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့တဲ့ အဘိဓမ္မာ တရားတော်ဟာ ခုနှစ်ကျမ်းရှိတယ်။
၁။ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း ၂။၀ိဘင်းကျမ်း။၃။ဓါတုကဓါကျမ်း။၄။ပုဂ္ဂလပညတ်ကျမ်း၊၅။ကထာဝတ္ထုကျမ်း၊၆။ယမိုက်ကျမ်းနဲ့ ၇။ ပဌာန်းကျမ်း တို့ ဖြစ်တယ်။
ဒီတရားကို သုံးလတိုင်တိုင် ဟောကြားခဲ့ရတာဖြစ်လို့ လူသားစစ်စစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့ ဘုရားရှင်ဟာ လူသားတို့ ဘာသာဘ၀ ဆွမ်းစားခြင်း ရေချိုးခြင်း ကိုယ်လက်သန့်စင်ခြင်းတို့ကို ဟိမ၀န္တာတောင်က စန္ဒကူးတောမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ရတာပါ။တရားဟော မပျက်အောင်လည်း နိမိတ္တ ရုပ်ပွားတော် ဘုရားတဆူ အဓိဌာန်နဲ့ ဖန်ဆင်းထားခဲ့ရတာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းသံဃာများအနေဖြင့်သော်၎င်း ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မြန်မာ လူမျိုးတို့ အနေဖြင့် သော်၎င်း မိမိတို့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင်း ငြိမ်းအေးချမ်းသာစွာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ အရာရာ သည်းခံ ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
လှိုင်လှိုင်သာ သင်းတော့တယ် ကန်မင်းငယ့်နန္ဒာ၊
တူရာသီငယ်၊ အာဿဝဏီ ကြယ်မြတ်
မီးမြင့်မိုရ်နှင့်၊ ၀ါဆိုကင်းလွတ်၊ သီတင်းကျွတ်မို့ ၊
ဘုံထွတ်ကယ် ဥကင်၊ ပွင့်စပယ် ရွှင်သောခါ၊
တိုင်းခွင်ပြည့် အောင်ချာမှာ၊ ဆီမီးဝါ ထိန်ထိန်လင်းပါလို့
♫ ပါရီကို လိုက်ကြမလား ♫
Posted by PhyoPhyo at Monday, October 07, 2013 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က စာရေးဆရာ ကိုကိုမောင်ရေးတဲ့ 'ပါရီတွင် သောင်တင်ခဲ့စဉ်က' အခန်းဆက်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရင်း ပါရီနဲ့ ကျွန်မကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပါရီက သိပ်လှသတဲ့။
အိပ်မက်ဆန်ပြီး အပျော်အပါးလည်း သိပ်များသတဲ့။ 'သူရဲကောင်းသုံးယောက်' ၊'ခါးကုန်းကြီး'၊'ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး'စတဲ့ ဘာသာပြန်တွေ တော်တော်လေးအဖတ်များခဲ့တော့' လူဝီဘုရင်'၊ '(Guillotine) ဂဲလော့တင်းခေါင်းဖြတ် စက်' ၊'ဘတ်စတီး အကျဉ်းထောင်'၊'ဗာဆိုင်းနန်းတော်၊' 'လူထုခေါင်း ဆောင် ဘရောက်ဆယ်လ်' ဆိုတာတွေ ကျွန်မ ခေါင်း ထဲ စွဲနေတာပေါ့။
ပြင်သစ်ဆိုတာနဲ့ အဲဒါတွေ တန်းစီပေါ်လာပြီး မျက်ဝါးထင်ထင်မြင် လိုက်ရသလိုအာရုံခံစားမိတယ်။ ခါးကုန်းကြီးဒေါသနဲ့လှုပ်ခတ်လိုက်တဲ့ ခေါင်းလောင်းသံဟာ ပါရီတစ်မြို့လုံးကို သိမ်သိမ့်တုန်ခါစေတာပါ။
Paris ကို ပြင်သစ်တွေက ပါရီလို့ခေါ်ပေမယ့် အမေရိကန်တွေကတော့ ပဲရစ်(စ်)လို့ခေါ်ကြတယ်။ ပါရီဟာ ပြင်သစ်ရဲ့ မင်းနေမြို့တော်ပါ။ မြို့ပြဧရိယာထဲ မှာကို ၁၂သန်းနီးနီး ရှိသတဲ့။ လူဦးရေ ထူထပ်သိပ်သည်းပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လူတွေ စုဝေးရောက်ရှိနေထိုင်ကြတယ်။ဥရောပမြို့တွေ ထဲမှာ အများဆုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပန်းချီ ပန်းပု အနုပညာ၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကအစ အစာရေစာမှာလည်း ဆန်းဆန်း ပြားပြားစားသောက်နိုင်တဲ့ မြို့တော်ပါရီပါ။ပြင်သစ်တွေ က စကားလည်းကြွယ်၊ ဟန်လည်းများသတဲ့။ ပါရီကို ဖက်ရှင်မြို့တော်လို့တောင် ခေါ်ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ အလှကုန်ပစ္စည်း မျိုးစုံ(ဥပမာ Chanel No.5,Lorial,Clarins စတဲ့)ထုတ်လုပ်ရာ မြို့တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တော်ကို လှပစွာ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ Seain မြစ်ဟာ ယူနက်စကို အဖွဲ့က ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် အဖြစ် သတ်မှတ်စံထားရတာပါ။ အီဖယ်မျှော်စင်ဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် အဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်။ ချားလ်ဒီဂေါလ်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့ ဥမူပနိုင်ငံတကာလေဆိပ်တို့ဟာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လေယာဉ်တွေအတက်အဆင်း အများဆုံးပါ။
ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ Eiffel မျှော်စင်၊ Arc de Tromphe အဆောက်အဦ၊ Notre Dame ဘုရားဝတ်ကျောင်း၊ LouVre ပြတိုက်၊ Moulin Rouge ရေခဲပြင်စတာတွေကို စိတ်တိုင်းကျ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် အမျိုးအမည် ပေါင်းများစွာ ကိုယ်သွားနိုင်ရင် သွားနိုင်သလောက် ကြည့်ရှုစရာတွေက တမေ့တမော တန်းစီနေတာပါ။ နှစ်စဉ် ခရီးသွားဧည့်သည်ပေါင်း ၄၅သန်းရှိပါသတဲ့။ ပါရီရဲ့ သမိုင်းအစကို နည်းနည်းပြောရရင် နောင်အခါ ဂဲလို စဲလ်တစ်(Gallo Celtic ) မျိုးနွယ်စုလို့ ခေါ်တွင် မယ့် စဲလ်တို-ရိုမင် (Celto-Roman) တို့ဟာ စိန်းမြစ် ပေါ်က အီလီဒီလာစီတီ( Eli-De_La_Site )ကျွန်း Lutetia မှာ အခြေချ နေထိုင်ကြတယ်။ 52BCE ခန့်မှာအဲဒီ စိန်းမြစ်လက်ဝဲဘက်ကမ်းက Lutetia အရပ်ကို မြို့ရွာကလေးတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်လာ ကြတယ်။
အခု အခါမှာတာ့ အဲဒီနေရာကလေးဟာ '၅ ဆက်မြောက် လက်တင်ရပ်ကွက်' ဖြစ်နေပါပြီ။ရောမလူမျိုးတွေဟာ အနောက်တိုင်းအင်ပါယာ တစ်ခုအသွင် ပျိုးထောင်ခဲ့ကြပြီး 508 CE မှာတော့ သူတို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်။ တစ်ဖန် Clovis မျိုးနွယ် တို့က Clovis of the Franks မင်းဆက်ကို စတင်တည် ထောင်ခဲ့တယ်။ စစ်ပြုလိုသူ ဗိုက်ကင်းတွေ(Viking) ဖျက်ဆီးလာတာကြောင့် ပြိုကွဲ ပျက်ပြားပြီးနောက်မှာမှ ဆဲတစ်ရွာကလေးမှာ ပြန်လည်စုစည်းနေထိုင်ကြပြီး (France Kingdom) ပြင်သစ်ဘုရင့် နိုင်ငံတော်ရယ် လို့ အောင်မြင်စွာစိုက်ထူတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
တဖြည်းဖြည်းစိန်းမြစ်လက်ျာဘက်ကမ်းကိုပါ ချဲ့ထွင် လိုက်တဲ့အခါ နှစ်တွေ ကြာညောင်းလာတာနဲ့အမျှ ယနေ့ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပါရီမြို့တော် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ရယ်လို့ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာ တစ်နေ့တစ်ရက် တည်းနဲ့မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်လ၊ တစ်နှစ်တည်းနဲ့လည်း မရနိုင်၊ နှစ်ပေါင်း ရာနဲ့ ထောင်နဲ့ချီ ပြုစုပျိုးထောင်ရတာ ပါ။
၁၈ရာစုနှစ်တွေမှာတော့ ဥရောပနဲ့ ပြင်သစ်မှာ နိုင်ငံရေးအုံကြွမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဘုရင်စနစ်၊ ကံကြွေးချစနစ်တွေ ဘုရင်ဂျီဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ လွှမ်း မိုးချုပ်ကိုင်မှုတွေကို လူထုက လက်မခံ၊ ငြင်းပယ်လာ တယ်။ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်တွေကို ပြန်လည် ခေါင်းဖြတ် သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်။ ပြင်သစ်လူမျိုးတို့ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်ကြီးမြတ်တော်မူသော နပိုလီယန်မင်းမြတ် ကိုယ်တိုင် အရှုံးကြီးရှုံးလို့ ဗုန်းဗုန်းလဲ ကျဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ၊ သမိုင်းအမွေအနှစ်အဖြစ်နဲ့တော့ ဧကန်မလွဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တာပါ။
ယနေ့ ပါရီမှာ Louvre ပြတိုက် နဲ့ Palais Royal တော်ဝင်နန်းတော်တွေကို တော့ အမှတ်တရ ချန်ထား ခဲ့ရစ်ကြတယ်။ လှပသေသပ်တဲ့ လူနေအိမ်ခြေ တိုက် တာ ဆင်တူကလေးတွေ ခေတ်နဲ့အညီ ပေါ်ပေါက်လာ တယ်။ တကယ်တော့ ပါရီဟာ ပြင်သစ်ရဲ့အသည်းနှလုံး အဖိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်တဲ့ မြို့တော်ကြီးပါ။ ပြတိုက်တွေ၊ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အဆောက်အဦကြီးတွေ၊ အော်ပရာ ဇာတ်ရုံကြီးတွေ မွစာကြဲနေတယ်လို့ ပြောရ ပေလိမ့်မယ်။
ရက်စက်တဲ့နေရာမှာလည်း ကမ်းကုန် ပါရဲ့။ ရာဇဝတ်သားတွေ ကို ခေါင်းဖြတ်စက်ကြီးတွေနဲ့ ဖြတ်ပြီးသတ်သတဲ့။ ဒါပေမဲ့ဘာမှ ကြောက်စရာမရှိပါ ဘူး။ ခေတ်တွေ စနစ်တွေ ပြောင်းခဲ့ပါပြီ။ ပါလီမန်စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်တာပါ။ လွတ်လပ်စွာ သွားလာလည်ပတ်နိုင် တဲ့အတွက် ခရီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့ စည်ကားပြီး အံ့ဘနန်းလှုပ်ရှားသက်ဝင်နေတဲ့ အထင်ကရ ပါရီပါ။
Living Fashion Magazine, 2013
ပူတာအိုမြို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြောက်ဘက် အကျဆုံးနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အရေးပါဆုံး မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နွေရာသီတွေမှာ ကားလမ်းကနေတောက်လျှောက် မောင်းနှင်သွားလို့ရပေမယ့် အများ အားဖြင့် လေ့လာရေးကွင်းဆင်းသူတွေ၊ တိုးရစ်ခရီးသည် တွေဟာ လေကြောင်းခရီးနဲ့ပဲ လာရောက်ကြတယ်။
ပူတာအို အနီးတစ်ဝိုက်မှာ ဒေသအလိုက် ပျော်ပါးမွေ့ လျော်ကြတဲ့ ငှက်ပေါင်းစုံ နေထိုင်ကျက်စားပြီးတော့ အဖိုးတန် သစ်ခွရောင်စုံတွေက သဘာဝအလျောက် ဟိုမှာ ဒီမှာ ပြန့်ကြဲပေါများကြွယ်ဝကြတယ်။ များသော အားဖြင့် သစ်ခွနက်လို ရှားပါးသစ်ခွတွေ မြောက်မြားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပူတာအိုဟာ ရှားပါးသစ်ခွတွေ ကြောင့် နာမည်ကြီးတာပါလို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။
Posted by PhyoPhyo at Friday, October 04, 2013 Labels: ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို, မေမေ့ရဲ့စာ
သူကတမျိုး။ ခင်လေးစီးလာတဲ့ စက်ဘီးရှေ့ကနေ သူ့ စက်ဘီးကိုချေဖျားထောက် ပိတ်ရပ်ထားသည်။ ခင်လေးပါ ဆင်းလိုက်ရပြီ။
"ဖယ်ပါ။ ခင်လေး ထမင်းဆာနေပြီ"
"ဆာရင် ချစ်တယ်လို့ မြန်မြန်ပြောလိုက် ..ဖယ်ပေးမယ်"
"မဟုတ်တာ။ အဲလို အကြပ်မကိုင်ပါနဲ့။ ဆရာ့ကို တိုင်မှာနော်"
"ကိုယ့်အကိုက ကျောင်းဆရာလေ။ တိုင်ပေါ့"
ခင်လေး ရင်ထဲ အောင့်သွားသည်။ တရားမရှိ ဓားမရှိ။ ခင်လေး ဦးလေးက ပညာအုပ် လို့ ပြောပစ်လ်ုက်ရမှာ။
ခင်လေး ဘာမှ မပြောဖြစ်။ စက်ဘီးကို နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကွေ့ပြီး အပြေးတက်စီးတော့သည်။နောက်ကိုလှည့်မကြည့်။ လိုက်နှောင့်ယှက်နေမလား တွေးပူမိသေး။
နေ့ခင်း ကျောင်းဆင်းတာနဲ့ ခင်လေးက အိမ်ကို အသော့နှင်ချင်သည်။ အမေချက်သည့် ထမင်းပူပူကို သူက စားချင်နေပြီလေ။
Posted by PhyoPhyo at Thursday, October 03, 2013 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
၁. စစ်မြေပြင်ရှေ့တန်းက ဘန်ဂလို
Posted by PhyoPhyo at Thursday, October 03, 2013 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအတွက် ကနေဒီယန်းရော့ကီးတောင်တန်းမှ ဆွဲဆောင်မှုအသစ်တွေ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုအဖြစ် နိုင်ရာဂရာရေတံခွန်စီးလှေအသစ်၊ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်နဲ့ တိုရွန်တိုမြို့လယ်ရေအောက်ပြခန်းအသစ်တွေ ဖွင့်လှစ်ပြသတော့မှာပါ။ အယ်လ်ဘာတာဒေသခံတိုင်း လာမယ့် ၂၀၁၄ မေလမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်မယ့် Glacier မိုးမျှော်လျှောက်လမ်းသစ်ကိုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်စွာစောင့်စားနေကြပါတယ်။ မသန်စွမ်းလူငယ် လူကြီးတွေပါ အားလုံးတက်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ လူသွားလမ်းကို မှန်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာကြောင့် လေထဲမှာတကယ့်ကို လွင့်မျောနေသလိုခံစားနိုင်ကြပါမယ်။ အွန်တေရီယို၊ နိုင်ယာဂရာမြစ်ရေစီးမှာ စီးမြောပြီး လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်မယ့် လှေအသစ်နဲ့ ခရီးစဉ်ကိုလည်း Hornblower Tour က ပုံမှန်ခရီးစဉ်တွေထက်ထူးခြားအောင်စီစဉ်နေပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးလှပဖို့ ချစ်ဖူးခဲ့သမျှ အချစ်တွေမျှဝေကြစို့...